Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda qarax lagu dilay Saraakiil katirsan maamulka Hirshabeelle.
Saturday September 14, 2019 - 06:36:52 in Wararka by Super Admin
Qarax aad u xooggan oo ay ku hoobteen mas'uuliyiin katirsan maamulka 'HiirShabelle' ayaa saaka ka dhacay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee sh/dhexe sida ay xaqiijisay warbaahinta ku hadasha Afka Xarakada Al-Shabaab.
Sawir hore weerar lagu beegsaday gaari ay la socdeen xildhibaanno Hirshabelle katirsan
Qaraxan oo ka dhashay miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka 'HiirShabelle' xilli uu marayay afaafka tuulada Gololeey oo qiyaastii 7KM ujirta degmada Balcad.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo la hadlay Idaacada Andalus ayaa sheegay in howlgalkaas oo ahaa mid qorsheysan lagu khaarijiyey mas'uuliyiintii bartilmaameedka ahaa uuna u dhacay sidii loo rabay.
"Allaah fadligii howlgalku wuxuu u dhacay sidii loo qorsheeyey, waxaana lagu dilay cadowgii bartilmaameedka ahaa" ayuu yiri Afhayeenka ciidanka Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab oo la hadlay Idaacada Andalus.
Qaraxan ayaa inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay Sabriye Cusmaan Toxoboow oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga ee maamulka 'HiirShabelle' hadana ahaa la taliyaha madaxweynaha maamulkaasi.
Waxaa sidoo kale lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii dhanka maaliyada ee gobolka Sh/dhexe Cabdullaahi Shitaawe iyo Xasan Baldoos oo ahaa sarkaal u shaqeeya hay'adaha sirdoonka shisheeyaha sida ay sheegeen saraakiisha Xarakada Al-Shabaab.
Hal askari oo la socday mas'uuliyiintaas ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa dadka dhintay halka gaarigii ay la socdeena uu bool bool u kala faniinay.
Wadada u dhexaysa Jowhar iyo Muqdisho ayaa noqotay meel ay Xarakada Al-Shabaab ku ugaarsato madaxda iyo saraakiisha maamulka 'HiirShabelle' waxaana xusid mudan in dhowr jeer wadadaas lagu laayey saraakiil, Xildhibaano iyo madax ka tirsan maamulkaasi.